Xulka qaranka Croatia oo u gudbay wareega afar dhamaadka koobka aduunka 2018 kadib markii uu rigoorayaal ku garaacay Russia – Gool FM
(Russia) 07 Luulyo 2018. Xulka qaranka Croatia ayaa gaaray wareega afar dhamaadka koobka adduunka 2018 kadib markii rigoorayaal 4-3 ku garaaceen dhigooda Russia.
Kulanka ayaa ku bilaawday cajiib ah iyadoo labada dhinac ay si xoogan isku weerareen, xulka qaranka Russia ayaa kulanka ku bilaawday si cajiib ah iyagoo ka faa’ideesanayay jamaahiirtooda iyo ciidooda, waxayna dhinac kasta halis ugu abuureen dhigooda Croatia.
Kulanka ayaa qeybtiisa hore ay ku kala nasteen labada xul Russia iyo Croatia barbaro 1-1.
Goolka koowaad ee ciyaarta waxaa ku hormaray xulka Russia waxaana u saxiixay daqiiqadii 31-aad waxaa gool u dhaliyay laacibkooda Denis Cheryshev kadib markii uu ka caawiyay Artem Dzyuba ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0 ay ku hogaaminayeen marti galiyaasha tartanka ee Russia.
Laakiin xulka qaranka Croatia ayaan ku daahin in uu goolka iska soo gudo waxaana daqiiqadii 38-aad gool madax ah u dhaliyay Andrej Kramaric oo goolkan ka caawiyay isna weeraryahaka waayeelka ah Mario Mandzukic ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-1.
Qeybtii labaad marka dib leysugu soo laabtay ayay sheeko halkeeda kasii wadeen labada dhinac markale ayayna soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan, iyadoo labada dhinacba ay sameeyeen isku dayo macquul ah.
Sheeko waxay xiiso badnaatay kadib markii uu xulka qaranka Croatia uu la yimid gool daqiiqadii 101-aad ee waqtigii dheerigi ahaa ee lagu daray ciyaarta waxaana u dhaliyay Domagoj Vida oo caawin ka helay Luka Modric ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-1.
laakiin xulka qaranka Russia ayaa markale dib u soo laabtay wuxuuna la yimid goolka barbaraha waxaana u dhaliyay Mario Fernandes daqiiqadii 115-aad ee ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray waxayna ciyaarta isku badashay 2-2.
ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 2-2, balse ugu dambey xulka Croati aayaa rigoorayaal 4-3 ugu gudbay wareega xiga ee afar dhamaadka koobka aduunka 2018.
Cristiano Ronaldo oo iska diiday dalab qaali ah ee kaga yimid horyaalka Chinese Super League